साग : पौडीमा गौरिका सिंहको कीर्तिमान ! - Merodesh.news
साग : पौडीमा गौरिका सिंहको कीर्तिमान !
काठमाडौं, २० मंसिर । नेपालमा तेस्रो पटक आयोजना भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पौडीमा गौरिका सिंहले राष्ट्रिय कीर्तिमानी बनाएकी छन् । तेह्रौँ सागअन्तर्गत महिला पौडीमा स्वर्ण पदक जितेकी गौरिकाले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाइन् ।
ललितपुरको सातदोबाटोस्थित पौडी पोखरीमा भएको स्पर्धामा ओलम्पियन सिंहले आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमानमा सुधार गरिन् । महिला २ सय मिटर ब्रेस्टस्ट्रोकको हिट चरणमा गौरिकाले २ मिनेट ३४.१६ सेकेण्डको समय निकाल्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाइन् । उनले आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा बनाएको आफ्नै नाममा रहेको २ मिनेट ४१.२५ सेकेण्डको कीर्तिमानमा सुधार गरेकी हुन् ।
उनले बिहीबार भएको दुई सय मिटर फ्री स्टाइलमा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन् । निर्धारित दूरी दुई मिनेट ०५ दशमलव ०६ सेकेण्डमा पूरा गरिन् । पौडीको व्यक्तिगत स्पर्धातर्फ गौरिकाले जितेको यो नै पहिलो स्वर्ण हो । यसअघि नेपालले टिम इभेन्टमा स्वर्ण पदक जितेको थियो । महिला दुई सय मिटर फ्री स्टाइलमा भारतले रजत तथा बङ्गलादेशले कास्य पदक जितेको छ ।